Horseed Sports Club Oo Garaacday Gaadiidka Iyo Elman Sports Club Oo Ka Badisay Llpp Jeenyo
Ramzi Yare	 Jul 2, 2019
Kooxda kubadda cagta Horseed oo guul muhiim ah ka gaartay dhigeeda Gaadiidka ka dib labada dhinac ay wada ciyaareen kulamadoodii 17-aad horyaalka Somalia Premier League. Qeybta hore ciyaarta waxaa lagu kala maray 1-0 oo ay hogaanka ku…
Horseed Sports Club Oo Kulan Adag Le Leh Gaadiidka Iyo Jeenyo & Elman Sports Club Oo Balansan
Ramzi Yare	 Jul 1, 2019
Kooxda kubbadda cagta Horseed ayaa kulankeedii 17-aad horyaalka Somalia Premier League 2018-2019 la leh xidigaha Gaadiidka waxayna labada dhinac kuwada dheelidoonaan garoonka Banaadir. 01/04/2019-labada dhinac oo wada ciyaareen kulankoodii…
Hordhaca:Mogadishu City Club vs Jazeera- kulan xiiso badan oo ka tirsan horyaalka Somalia Premier
Ramzi Yare	 Jun 30, 2019
kooxda dowladda hoose ee Muqdisho City Club ayaa ciyaar xiiso badan oo ka tirsan horyaalka Somalia Premier olalaha 2018-2019 iyo kulankoodii 17-aad horyaalka olalahan. Xidigaha Mogadishu City Club ciyaartii u danbeesay horyaalka waxa ay…
Dekedda Oo U Muuqata In Ay Sii Carbuunatay Horyaalka Somali Premier League
Kooxda Dekedda ayaa hal tilaabo u jirta iney ku guuleysato horyaalka Somali Premier League kadib markii ay galabta 1-0 ugu adkaatay naadiga Heegan Fc, kulan ciyaareed qeyb ka ahaa horyaalka. Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan…
Falanqeynta: Heegan fc Vs Dekedda Fc- Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato
Ramzi Yare	 Jun 29, 2019
Kooxaha Heegan fc iyo Dekedda ayaa kulan xiiso badan kuwada dheeli doona garoonka Banadir Stadium ciyaar qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League. Kulankan ayaa ah midkii 81-aad ee laga dheelo horyaalka si kale hadii aan u micneyo waa…
Muxuu Ku Soo Dhamaaday Kulankii dhaxmaray kooxaha Elman Iyo Muqdisho City Club
Ramzi Yare	 Jun 27, 2019
Kooxaha Elman iyo Muqdisho City Club ayaa galabta kulan xiiso badan kuwada dheelay garoonka banadir Stadium ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Somali Premier League. Qeybtii koowad ayaa lagu kala nastay 2-2 waxaana goolka la horeysay…
Hordhaca: Elman Fc Vs Muqdisho City Club Kulanka Caasimada & Wax Waliba aad ugu baahan tahay
Ramzi Yare	 Jun 26, 2019
Kooxaha Elman Fc Iyo Muqdisho City Club ayaa galabta ku balansan garoonka Banadir Stadium ee Degmada Cabdicasiis, Ciyaar qeyb ka ah Horyaalka Somali Premier League. Kulanka ugu taageeryasha Badan ayaa dhici doona galabta waa ciyaarta loo…
Muxuu Ku Soo Dhamadaay Kulankii U Dhaxeeyay Kooxaha Horseed iyo Heegan
Kooxaha Heegan iyo Horseed ayaa kulan adag wada ciyaaray garoonka Koonis ciyaar qeyb ka aheyd horyaalka Somali Premier League. Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan labada kooxod ayaa waxey soo bandhigeyn kubadd aad u sareyso oo ay ku…
Hordhaca:Heegan Vs Horseed -Xogta Kulanka Wax Walba La Xiriirta Ciyaarta
Ramzi Yare	 Jun 25, 2019
Kooxaha Heegan iyo Horseed ayaa galabta ku ballansan garoonka Banadir Stadium ciyaar qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League ee fasal ciyaareedkan 2018-19. Ciyaartan ayaa dhaxmari doonto kooxaha Horseed iyo Heegan waana kulanka loogu…
Dekedda ayaa guul raaxo leh ka gaartay dhigeeda Jazeera Sports Club
Kooxda Kubadda cagta Dekedda ayaa guul raaxo leh ka gaartay dhigeeda Jazeera Sports Club waxayna labada dhinac u aheyd kulamadoodii 16-aad horyaalka Somalia Premier League xili ciyaareedka 2018-2019. Qeybta 1aada dheesha kooxda Dekedda…